Daawada Saxda ah Ee Siigada guska | shumis.net
Home » galmada » Daawada Saxda ah Ee Siigada guska
Daawada Saxda ah Ee Siigada guska
Codsigiina ku aadanaa xal dawo ma leeyahay siigada iyo sidee loo joojin karaa waxa ay noqotay su’aal runtii qoraayaasha xayeysiin.com ay isugu tageen, sidii loogu heli lahaa maqaal dhaxal gal ah oo aqristaayaasheena ay ku qanci karaan.
“Dhalinta kulantoy qofkii awooda arimaha guurka ha guursado, maxaa yeelay isagaa u indha daboolid wanaagsan, Farjigana ilaalin badan, qofkaan awoodinse waxaa korkiisa ahaaday Soom oo u ah ka hortag” waa xadiis Mutafaq ah oo ay Bukhaari iyo Muslim weriyeen.
Waan La Qabsaday…………. dhalin badan ayaa jirta oo aan ka cabsi qabno sida aan ku kala ilaalin laheen gacantooda iyo xubinta taranka ha yeeshee haddii aan nahay xayeysiin.com waxaan u jeedin laheyn dhalintan in marka hore ay ku qancaan qeybaha hore oo runtii ah dhaxal gal hakin kara siigada haddii aad ka biyo diidsan tahay, Siigada badan qofka caadeysta mas ayuu noqdaa iska Ilaali mas ha noqonin amase bahal ayaa ku cunaayo hayeeeeeeeeeeeeeeey….
Oo aan Ula Jeedo Haddii aad ku sii raagto Siigada waxaa heli doontaa abaal marin oo ay ka mid yihiin indha beel, iloowsho badan, biya bax deg deg ah, jirka oo ka lunta firfircoonida, koontoroolka lagu xakameen kaadida oo lunta iyo qasaaro intaa ka badan Wixii talo amase tusaale ah ee ku aadan maqaalkan Nala qeybso fikirkaada xor ayaad u tahay
Title: Daawada Saxda ah Ee Siigada guska